Androany dia azonao atao ny mahazo ny fanambin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy | Avy amin'ny mac aho
Androany dia afaka mahazo ny fanambin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy ianao
Andro vitsy lasa izay dia nizara taminay ny fahatongavan'ity fanamby vaovao ho an'ny mpampiasa Apple Watch ity ary androany ny andro. Ny fanambin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy dia mora azo amin'ity indray mitoraka ity ary na iza na iza dia afaka mahazo ny medaly sy ny sticker izay azo alefa amin'ny endrika hafatra natolotr'ity fanamby vaovao ity.
Ity no faharoa amin'ny volana martsa ary amin'ity tranga ity hahatratrarana azy dia tsy maintsy manatanteraka a Miofana mandritra ny 20 minitra na mihoatra aho miaraka amin'ny Apple Watch. Raha ny lojika dia ny mpampiasa manana ny famantaranandron'i Apple ihany no misy ny fanamby fa na dia tsy manana izany aza ianao dia afaka manao fanazaran-tena ary hanatsara ny fahasalamanao.
Noho izany dia manana tontolo andro ianao handray ity medaly ity ary hahatratra ny tanjona hamita ny fampihetseham-batana 20 minitra na mihoatra. Ny zava-dehibe amin'ity karazana fanamby ity dia ny tsy mahazo medaly, izay koa raiso io "fatra" fahasalamana io izay tena mahaliana. Ny fiofanana hotanterahina dia tsy voalaza, mety ho fiofanana rehetra azontsika amin'ny famantaranandro.
Ho an'ny volana manaraka dia azo antoka kokoa fa Apple dia manana fanamby hafa efa nomanina ho antsika ary amin'ity indray mitoraka ity dia miresaka momba ny Andron'ny Tany isika, fanamby iray izay azo antoka fa ho tonga amin'ny volana aprily ho an'ireo mpampiasa manana Apple Watch. Raha mitranga izany dia hifantoka amin'ity fanamby vaovao ity isika anio Alatsinainy 8 martsa ary lozika handeha hitondra ny medaly any amin'ny valizintsika isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Androany dia afaka mahazo ny fanambin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy ianao
Apple manavao ny Final Cut Pro, iMovie, Compressor ary Motion amin'ny fotoana iray
Sonos Roam dia mamoaka mpandahateny Sonos vaovao